Ny eva miendrika fera no famantarana raha azo pasohina ilay lamba na tsia. Ny isan’ny teboka ao anatiny no milaza ny fangitra avon’ny mari-panan’ny fera.
Ny ankamaroan'ny fera, sy ny fitaovana fipasohana amin’ny ankapobeny, dia misy sary mampifandray ny isan’ny teboka (mari-pana) sy ny karazan’ny lamba (kofehy) pasohina, kanefa aleo manaraka izay toromarika lazain’ny eva amin'ny etiketin'ny lamba. Raha tsy misy eva milaza ny fipasohana amin'ny etikety dia tsara kokoa ny miantehitra amin’ny isan’ny teboka (mari-pana) noho ny karazan’ny lamba satria matetika tsy voalaza ny fatran'ny kofehy amin’ny lamba vita amin'ny kofehy mifangaro.
Fera mafana mahatratra 200°C.
Lamba vita amin’ny hasy na lin. Tsara kokoa raha pasohina mbola malana na amandoina ny lamba. Azo atao koa ny mampiasa fera misy entona.
Fera antoniny mahatratra 150°C.
Lamba vita amin'ny volonondry, lasoà, pôliestera, viskôzy. Mampiasa patimoy na fera misy entona, ary tsy tsindriana mafy loatra.
Fera malefaka mahatratra 110°C.
Lamba vita amin'ny pôliakrilika, pôliamida.Mety kokoa raha pasohina amin'ny lafy ratsiny ary tsy amporisihina ny fampiasana fera misy entona
Tsy azo pasohina. Manimba ny bikany na ny endriny ny fipasohana azy.
Lamba vita amin'ny elastana. Ny lamba vita amin'ny pôliestera dia tsy mora miforitra ary tsy mahatanty mafana ka tsy amporisihana ny fipasohana azy.
ny faritra tsy mahatanty hafanana dia pasohina amin’ny lafy ratsiny
mila mitandrina koa amin’ny karazana lamba misy sosony na ny lamba efa miforiporitra hatrany ampihandohana (embossed fabric)
PPejy teo aloha: Fanamainana << | >> Pejy manaraka: Matihanina